Baarlamaanka Ingiriiska Oo Ka Hadlay Xidhiishka Sii Xumaanaya Ee Somaliland Iyo Soomaaliya | Haqabtire News
Baarlamaanka Ingiriiska Oo Ka Hadlay Xidhiishka Sii Xumaanaya Ee Somaliland Iyo Soomaaliya
Hargeysa:-(HTN) Baarlamaanka dalka Ingiriika ayaa warbixin ka soo saaray xaaladda dalka Soomaaliya iyo weliba xidhiidhka ay Soomaaliya la leedahay Somaliland oo sii xumaanaya.
Warbixinta uu soo saaray baarlamaanka Ingiriisku waxay sheegtay in Farmaajo ay caqabad kale ka soo waajahaday qabiilka Abgaal ee Hawiye oo aaminsan in qof ka soo jeeda lagu bedelo raysalwasaare Xasan Cali Khayre. “Farmaajo oo ka soo jeeda qabiilka Daaroodka ayaa sidoo kale waxa ay caqabadi ka haysataa qabiilka awooda badan ee Abgaal oo ah Hawiye kuwaas oo dareensan inaanay cidi ugu jirin dawladiisa. Qaarkood ayaa gaadhay inay ugu baaqaan in la bedelo Rayalwasaarihiisa Xasan Cali Khayre oo lagu bedelo mid iyaga ka soo jeeda.” ayay tidhi warbixintu.
Waxay warbixintu intaas raacisay in dhawr jeer mooshin ka dhan ah Farmaajo sannadkii 2017 ay siyaasiyiin mucaarad ahi isku dayeen laakiin aanay ku guulaysan. “Laakiin Raysalwasaare khayre” ayay warbixintu tidhi “Ayaa dabada ka riixaya hadda mooshin ka dhan ah guddoomiye Jawaari. Reer galbeedka iyo dawladaha Afrika ayaa walaac ka muujiyay qalalaasaha siyaasadeed ee Soomaaliya ee sare u socda. Dano shisheeya ayaa iyaguna sii cakiray muuqaalka siyaasadeed. Qaar ka mid ah dalalka gacanta Carabta ayaa ku mashquulsan inay kor u qaadaan saamayntooda, iyagoo qaarkood maalgelinaya siyaasiyiin Soomaali ah.”
Warbixintu waxay sheegtay in dalalka Qatar, Imaaraadka Carabta iyo Sucuudiguba ay qayb ka yihiin caqabadaha siyaasadaha Soomaaliya. Doorkii ay dawladda Farmaajo ka qaadatay xiisadda gacanka ee ahayd dhexdhexaadka ayay warbixintu sheegtay inay Soomaaliya iyo Farmaajo u soo jiiday in laga aarsado, , “Iyadoo laga aarsanayo waxay joojiyeen dhaqaalihii ay ku taageeri jireen miisaaniyadda dawladda Soomaaliya. Laakiin dawlad goboleedyada qaarkood ayaa la saftay Sucuudiga iyo UAE.” ayay tidhi.
Warbixintu waxay sheegtay in diblomaasiyiin badan oo uu ku jiro safiirka Ingiriiska Danjire David Concar ay ugu baaqeen Somaliland iyo Soomaaliya inay iskaashadaan haddana inaanay weli muuqan rajo muujinaysa in wada hadaladii hakadka galay ay bilaabmaan “Inkastoo uu safiirka Soomaaliya ee Ingiriiska David Concar iyo diblomaasiyiin kale ay dhawaan ugu baaqeen labada dhinac inay iska kaashadaan sugidda cuntada oo ah arrinta degdeg ah, haddana xidhiidhku wuu sii xumaaday. Ma jiraan muddooyinkan tilmaamo muujinaya in wada hadaladii hore u qabsoomay laakiin istaagay 2015 ay bilaamaan.” ayay tidhi warbixintu.
Warbixintu waxay ka hadashay heshiisyada dhex maray Somaliland iyo UAE ee ku saabsan dekedda Berbera iyo saldhiga miltari iyo sida ay dawladda Soomaaliya uga hortimid in la horumariyo dekedda Berbera “Bishii March ee 2017, Somaliland waxay ogolaansho u siisay UAE inay saldhig milatari ka samaystaan magaalo xeebeedka Berbera. UAE oo soo dhex maraysa shirkadda qaranku leeyahay ee DP world iyo Itoobiya ayaa qayb ka noqday qorshe lagu horumarinayo dekedda Berbera. Dawladda Farmaajo ayaa si cad uga hortimid, waxaanay inay soo dhex galaan ka dalbadeen Jaamacadda Carabta, aqalka baarlamaanka Soomaaliya wuxuu ansixiyay in la mamnuuco DP world. Dawladda Somaliland ayaa iyaduna dhinaceeda ku adkaystay in arrintani soconayso.”